Linux Mint Debian Shanduro 3 "Cindy" Cinnamon Edition iri pano, gadziridza izvozvi | Kubva kuLinux
Linux Mint Debian Edition 3 "Cindy" Cinnamon Edition iri pano, gadziridza izvozvi
Clement Lefebvre weLinux Mint akazivisa iyo kuwanikwa kwazvino kwe Linux Mint Debian Shanduro 3 "Cindy" Cinnamon Edition, zvichibva pane yazvino vhezheni yakagadzika yeDebian.
Kuenderera mberi nechiroto chekupa vashandisi imwe nzira kune yakajairwa, yakajairwa Ubuntu-based editions yeLinux Mint, Linux Mint Debian Edition (LMDE) 3 "Cindy" Cinnamon Edition inowanikwa kurodha pasi, ichiunza nazvino graphical nharaunda. Cinnamon 3.8 uye yazvino yakatsiga repositi kubva kuDebian.
Pamusoro pegadziriro dzebug uye kugadzirisa kwekuchengetedza kweDebian, iyo Linux Mint Debian Edition (LMDE) 3 base package "Cindy" Cinnamon Edition inoramba yakafanana, saka vashandisi vako vanongoda kuisa kamwe chete uye vanogashira zvigadziriso zvachose.
Maitiro ekuvandudza Linux Mint Debian Edition kune yazvino vhezheni
Kana iwe uri kushandisa Linux Mint Debian Edition 2, unogona kugadzirisa kune vhezheni 3 nekutanga iyo yekuvandudza turu inosanganisirwa musystem, iwe unongofanirwa kudzvanya bhatani rekuvandudza kuti uvandudze APT cache uye shandisa shanduko dziripo.
Kuti uenderere mberi, isa yekuvandudza chishandiso nemirairo inotevera:
sudo apt kuisa mintupgrade
Kuti utore zvese mapakeji anodikanwa ekumhanyisa mhanyisa unotevera kuraira:
mintupgrade kurodha pasi
Wobva waisa zvidzoreso nekumhanyisa unotevera kuraira:
Recuerda, que Linux Mint Debian Edition 2 Cinnamon Edition ichatsigirwa kusvika munaNdira 1, 2019saka une mwedzi yakati wandei yekumisikidza iyo system isati yaenda isingatariswe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Linux Mint Debian Edition 3 "Cindy" Cinnamon Edition iri pano, gadziridza izvozvi
Maitiro ekumisikidza iyo sevha yewebhu uye kubata webhu paGNU / Linux
Canonical inoda rubatsiro rwako kuyedza Nvidia rutsigiro rweUbuntu 18.04 uye 18.10